musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Troy Deeney Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nhoroondo Yese yeiye anozivikanwa zvikuru nezita reZita reNickname; "Dee". Our Troy Deeney Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda zvisinganyatsozivikanwi nezvake pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvechinangwa chake chekuita zvikwaniso asi vashomanana vanofunga nezveTroy Deeney's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Troy Deeney Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Troy Matthew Deeney akaberekwa musi we 29th waDecember 1988 muWest Midlands, Birmingham, England. Akazvarwa kuna amai vake, Emma Deeney nababa, Paul Anthony Burke. Troy akakurira ku Chelmsley Wood. Akanga ari mumwe wevana vatatu akaberekwa nevabereki vake, avo vakaparadzaniswa paaiva nemakore 11. Kuparadzana kwavo kwakaratidza kutanga kwekurera kwakashata sekutsanangurwa muhupenyu hwake hwepakutanga.
Zvakakosha kucherechedza kuti kunyange pazera remakore 14, mutambo hauna kutanga Troy. Mushure mokunge vabereki vake vakaparadzana, chinangwa chake chaiva kutanga kutanga dzidzo yake. Chokutanga chaiva, Troy akadzingwa pachikoro paaiva 14, asati adzoka pazera re 15. Chinangwa chake chokuva nedzidzo dzakapedza hachina kuitika. Akasiya chikoro pa16 pasina GCSEs uye akatanga kudzidziswa secheka, achiwana £ 120 vhiki.
Troy Deeney Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts -Kukurira Mukurumbira
Mushure mokucherechedza dzidzo yakanga isiri kudana kwake, Troy akasarudza kutamba bhora sechisarudzo chokupedzisira. Mushure mokuita maitiro akawanda, akakokwa na Aston Villa chikoro chekutora chikamu mukutongwa kwemazuva mana ezhizha nechinangwa chokuwana chikwereti chevechidiki. Zvisinei, akashaya mazuva matatu okutanga. Izvi zvakaita kuti chikwata chive chichinyadziswa sezvo vasina kumupa chero kambani.
Zvisinei, pasinei nokuodzwa mwoyo ne Villa, kambani kaduku Chelmsley Town iyo yaimbove yakakumbira kumubvuma. Paaiva paChelmsley, akatariswa naWalsall's Head of Youth Mick Halsall, uyo akangopinda mumutambo Deeney ari kutamba nokuti mwana wake ari kutamba uye nekuda kwemutambo waakarongerwa kuti apinde kuzorambidzwa.
Deeney aive achitamba paakanga akadhakwa asi akawana zvinomwe zvinowanikwa mukukunda kwe 11-4. Murwi akadhakwa akabva apiwa mhosva kuWalsall asi akazopinda mushure mokunge mutungamiri wake Chelmsley amubvisa pamubhedha ndokubhadhara tekisi.
Kuiswa kwe Chris Hutchings sezvo maneja akabatana naDeeney achiwana chinangwa chekutora. Sezvo munhu asingadiwi anoda kubudirira, Deeney musi we 4th weAugust 2010, akapiwa chikumbiro chekuendesa chakanyorwa mukati mechido kubva kumakwikwi eChampionships akawanda. Yakanga iri Watford iyo yakave nerombo nechisimbiso chake. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Troy Deeney Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts -Nhoroondo yejeri
Pana 25 June 2012, Deeney akatongerwa mwedzi gumi mujeri nokuda kwekurohwa murume mumusoro munguva yekusangana. Akasunungurwa mushure mekushumira kwemwedzi mitatu yemutongo uyu, mushure mokuratidza kusuruvara kwake, uye kuti iye akanga ari mutadzi wekutanga. Kubvira pakasunungurwa kubva mutirongo mu2012, akawana GCSEs muChirungu, Science uye Mathematics.
Troy Deeney Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts -Ukama uye Upenyu hweMhuri
Deeney akaroora mudzimai wake akanaka, Stacey Deeney. Ane mwanakomana, Myles, nemwanasikana, Amelia.
Troy Deeney ave ari oga pacheche yake yeArsenal kubvira apo yakazobudiswa pachena kuti mwanakomana wake aiva muArtenal fan. Mukomana muduku akafananidzirwa nemamu wake pasi haana zvikonzero zvekumisa kufanana kwake kweArsenal.
Troy Deeney Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Troy Deeney ane zvinhu zvinotevera kumunhu hwake.
Troy Deeney's Strengths: Iye zvino ane dambudziko kupfuura kare. Kunyanya zvakadaro, anorangwa, ane kuzvidzora uye zvino ari mutungamiri.
Kuneta KweTroy Deeney: Dzimwe nguva, anoshanda achida iye anoziva-iyo-yose. Anogona kunge asingakanganwiri uye nguva dzose ane tarisiro kune yakaipisisa.
Zvakaita Troy Deeney Anofarira uye Zvavasingadi: Anoda mhuri yake, tsika yake. Troy mumwe munhu aisadawo zvose pane imwe nguva.
Muchidimbu, Troy Deeney mumwe munhu anonyanya kukura. Iye ane chimiro chemukati chekusununguka chinomubatsira kuti aite kufambira mberi kukuru muupenyu hwake hwega uye hwehutano. Sezvo mushure mekunge vaenda kujeri, Troy ava iye zvino ave nyanzvi yekuzvidzora. Ane kodzero yekufambisa nzira, nokudaro kuita zvirongwa zvakasimba uye zvechokwadi zvehupenyu hwake uye hwemhuri yake.
Troy Deeney Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Vabereki vaTroy Deeney vakamuvhiringidza sezvo vakanga vasingakwanisi kugara pamwe chete panguva yaaida zvikuru. Zvakanaka, iye akabva kumhuri yakadzika yemhuri.
HANZVADZI KONAMA: Imwe hanzvadzi yaTroy, Ellis, ndeyemutevedzeri wemutambo wenhabvu anotamba semuti wepakati. Ellis akatanga basa rake paAston Villa, kwaakanga ari mutungamiri weboka ravo rechikoro vasati vasunungurwa.
Nhasi, Ellis ndiye mudzidzisi wega, uye Deeney akabatsira kubhadhara kurovedza kwake mune basa.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nokuverenga Troy Deeney Childhood Indaba yedu pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.